Sei OTT Tekinoroji Iri kutora Iyo Yako TV | Martech Zone
Iko OTT Technology Iri Kutora Sei Yako TV
China, June 8, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Jeffrey Hayzlett
Kana iwe wakambo binge-wakatarisa TV yakateedzana paHulu kana waona bhaisikopo paNetflix, saka wakamboshandisa Zvakanyanyisa zvemukati uye anogona kunge asina kana kumbozviziva. Kazhinji inonzi se OTT munharaunda dzenhepfenyuro uye tekinoroji, mhando iyi yezvinhu inokanganisa tsika dzevatambi veTV uye inoshandisa iyo Internet semotokari kutepfenyura zvemukati senge yazvino episode mweni Zvinhu kana kumba kwangu, ndizvo Downton Abbey.
Hakusi chete tekinoroji yeOTT inoita kuti vatariri vatarise mashoo uye mabhaisikopo pakadzvanya bhatani, asi zvakare inovapa rusununguko rwekuzviita nenzira yavo pachavo zvakanyanya chero pavanenge vachida. Chimbofunga nezvazvo kwechinguva. Kangani munguva yakapfuura iwe yawakatofanira kukotama kunze kwezvirongwa nekuti pakanga pasina nzira yawaizopotsa mwaka wekupedzisira wenguva yako yaunofarira prime TV show?
Mhinduro yacho ingangoitwa maVCR nemaDVR asati aunzwa - zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti nzira yatinoshandisa midhiya yachinja zvakanyanya. Tekinoroji yeOTT yakasunungura zvirambidzo pakati pevanopa zvemukati nevashandisi vachiri kupa vatengi mukana wezvirongwa zvinovaraidza zvavanotarisira kubva kufirimu hombe uye studio dzeTV. Zvakare, ndakataura here kuti inonyanya kushambadzira mahara?
Pamberi pekuunzwa kwezvinyorwa zveOTT - yekutanga inozivikanwa rezwi iri yaive mubhuku ra2008 Nhanganyaya yeVhidhiyo Kutsvaga Injini naDavid C. Ribbon naZhu Liu, tsika dzevaoni dzeTV dzakaramba dzakangofanana mumakore apfuura. Muchidimbu, iwe wakatenga terevhizheni, wakabhadhara kambani tambo kuti uwane mukana wegeji yemakiteshi, uye voila, iwe waive nekwaivaraidza kwemanheru. Nekudaro, zvinhu zvachinja zvakanyanya sekuti vatengi vazhinji vakacheka tambo uye chero zvido zvavanomisikidzwa nemakambani etambo. Zvinoenderana ne2017
Maererano ne2017 tsvakurudzo inotungamirwa naLeichtman Research Group, Inc., makumi matanhatu nemasere emhuri dzese dzakabvunzwa dzakataura kuti vanoshandisa sevhisheni seNetflix, Amazon Prime, Hulu, kana vhidhiyo pazvinenge zvichidiwa. Yakawana zvakare kuti 64% yevakabvunzwa vakati vanogara vachiwana Netflix kumba, vangango peta zvakapetwa (1,211 muzana) avo vakadzoka muna 54. Kutaura zvazviri, sa Q28 2011, Netflix yaive ne98.75 mamirioni ekubhadhara vanyori pasi rese. (Heino inotonhorera chati kuratidza nzira yayo mukutonga kwenyika.)
Uye nepo OTT yakaona kukura kukuru mukuzivikanwa pakati pemhuri kutenderera pasirese, imwe nharaunda kunyanya yandakaona kwayakawana munguva pfupi yapfuura kunokwezva kuri mukati mevanhu vebhizinesi. Pamusoro pegore rapfuura kana zvakadaro, ndaona akawanda masangano achitora tekinoroji yeOTT senzira yekuratidzira yavo ruzivo kana kuwana yemumwe munhu nekanguva. Kugona uku kunonyanya kukosha pakati pevabati vebasa vakabatikana vanoda ruzivo rwechinyakare kunyangwe vangave vari panguva iyoyo.
Mumwe muenzaniso mukuru ndewe C-Suite TV, iyo inoburitsa terevhizheni yangu C-Suite naJeffrey Hayzlett. Pakutanga gore rino, iyo-inodikanwa bhizinesi chiteshi yakagadzira kudyidzana na ReachMeTV, "mitambo yakawanda yevaraidzo netiweki yekuparadzira yepasirese," kutepfenyura shoo yangu paterevhizheni kunhandare hombe makumi mashanu muUnited States uye anodarika miriyoni imwe emahotera munyika. Zvinonakidza kuona chirongwa changu chichiwedzera kuoneka, kunyanya nevateereri vandinoda kusvika.
Mukufunga kwangu, nhandare uye mahotera zvisina tsarukano dzimwe nzvimbo dzakanakisa dzekutora kutarisisa kwevafambi vebhizinesi avo vanowanzoona kuti nguva yavo yekuzorora masikati ndeyekumirira kubata ndege kana kuzorora pahotera yekugamuchira (tora kubva kune mumwe munhu ndiani anoziva izvi zvese zvakanaka).
Asati, kana mukuru webhizimusi aida kutarisa chero eiwo emabhizinesi ekuratidzira, iye aifanira kuzviita "yechinyakare nzira" yekuiona pane imwe nguva. Asi nekuunzwa kwetekinoroji yeOTT, ivo vanokwanisa kuwana chirongwa chinosangana nezvavanofarira pane yavo nguva.
Ndine chokwadi chekuti tekinoroji yeOTT icharamba ichingokura kure mune ramangwana apo patinozova nzanga yepamusoro padhijitari. Uku kukura kuchagonesa mabhizinesi nevatengi zvakafanana kuti vabatanidzane pasirese pasine zvipingamupinyi zvatakapihwa nevatambi vetambo kwenguva refu kwazvo. Sekudikanwa kwekukasira kuwana mukana wekuvaraidza uye wezvekudzidzisa kunowedzera, zvichave zvinonakidza kuona kuti tekinoroji yeOTT ichatisvitsa kupi. Ini handizive nezvako, asi ndichave ndichigadzirisa mukati kuti ndione.
Tags: amazon primeC-Suite TVC-Suite naJeffrey Hayzletthululeichtman boka rekutsvagaNetflixipapoZvakanyanyisaReachMeTVvhidhiyo pane zvinodiwa
Jeffrey Hayzlett inguva yekutanga terevhizheni uye redhiyo inomiririra C-Suite naJeffrey Hayzlett uye Executive Maonero paC-Suite TV uye Zvese Bhizinesi naJeffrey Hayzlett paC-Suite Radio. Hayzlett ibhizimusi repasirese mukurumbira, mutauri, munyori anotengesa zvakanyanya, uye Sachigaro weC-Suite Network, imba yenyika ine simba kwazvo pasi pevatungamiriri veC-Suite. Batanidza naHayzlett on Twitter, Facebook, LinkedIn, kana Google+.
Kuchengeta Runhare Runhare kubva kuOganiki uye Kubhadharwa Kutsvaga
TurnTo: Syndicate Ongororo neako Chigadzirwa Vanoendesa